वर्षको अन्तिम दिन पनि नेप्से बढ्यो
काठमाडौं, चैत ३० । वर्षको अन्तिम दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बृद्धि आयो । वि.सं. २०७२ को सुरुआती दिनमा ९ सय ४४ रहेको नेप्से अन्तिम दिनसम्म बढेर करिब १४ सय बिन्दूमा पुग्यो ।
सिन्धुपाल्चोक, चैत ३० । गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका मंगलबारदेखि अस्थायीरुपमा सन्चालन गरिएको छ । भूकम्पपछि खासामा रहेका कन्टेनरहरु नेपाल ल्याउने गरी एक महिनाका लागि नाका खोलिएको हो ।
वर्ष २०७२ः नाकाबन्दी, अभाव र कस्ट (भिडियो रिपोर्ट)
वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सम्हालिन नपाउँदै नेपाली जनताले नाकाबन्दीको ठूलो मार खेप्नुपर्‍यो । जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । ग्यास, पेट्रोल, डिजल जस्ता पदार्थहरुको आपूर्ति अझै सहज बन्न सकेको छैन । २०७१ सालको अन्तिमतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा जति हाइहाइ बटुले नाकाबन्दी पछि नेपालमामात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रियजगत्मै उनको छवीमा धक्कासमेत लाग्न पुग्यो । जसको प्रभाव दुई देशबीचको सम्बन्धमासमेत देखियो ।
युवामैत्री उद्योग सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : उद्योगमन्त्री
काठमाडौं, चैत ३० । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले युवामैत्री उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
कुलो निर्माण भएपछि स्थानीयबासी हर्षित
जुम्ला, चैत ३० । जुम्लाको डिल्लीचौर गाविसमा सिंचाईका लागि कुलो निर्माण भएपछि स्थानीयबासिन्दा हर्षित भएका छन् ।
आगामी वर्ष पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको उच्च प्रगति कायमै : विश्व बैंक
काठमाडौं, चैत २८ । आगामी वर्ष पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको उच्च प्रगति कायमै रहने भएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले आगामी वर्ष २०१७ मा यस क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको हो ।
‘घुमफिर वर्ष २०७३’ मनाउने घोषणा
काठमाडौं, चैत २९ । नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७३ लाई घुमफिर वर्ष २०७३ कोरुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । बोर्डले सोमबार यस अभियान सार्वजनिक गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाबीच समझदारी
काठमाडौं, चैत २९ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
काठमाडौं, चैत २९ । सोमबार सुनको मूल्य पुनः उकालो लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पच्छ्याउँदै यसदिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले उकालो लागेर ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
शेयरमा सुधार जारी
काठमाडौं, चैत २९ । सोमबार पनि शेयर बजार सकारात्मक रह्यो । उतार–चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से डेढ अंक बराबरले धनात्मक रहेर १३ सय ८३ दशमलव आठ पाँच कायम भएर थामियो ।
उद्योगी र लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्छ : प्रधानमन्त्री